चाड पर्वहरुले हामीलाइ एकताको सुत्रमा बाँधेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली - Rajmarga
चाड पर्वहरुले हामीलाइ एकताको सुत्रमा बाँधेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माल ओलीले नेपालमा मनाइने चाड पर्वले नेपालीहरुलाइ एकताको सुत्रमा बाध्येको बताएका छन् । उनले इन्द्र जात्राको शुभकामना दिदैं यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपालमा रहेको जात्रा पर्व तथा साँस्कृति पर्वहरु नेपालको पूँजी भएको बताए । प्रधामन्त्र िओलीले काठमाडौं उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि मनाइँदै आएको इन्द्रजात्रा पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको शुभकामना
काठमाडौं उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि मनाइँदै आएको इन्द्रजात्रा पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । अन्तरसाँस्कृतिक सद्भावको समुन्नत सन्देश प्रवाह गर्ने यस्ता पर्वहरु हाम्रा साँस्कृतिक पूँजी हुन् ।
सानो भूगोल भए पनि यहाँ बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक अनुपम विशेषतायुक्त चाडपर्वहरु छन् । ती सबै पर्वहरु हामीलाई एक आपसमा जोड्ने साँस्कृतिक पूँजी हुन् । विभिन्न जाति, समुदाय र भूगोलमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुले मनाउने यस्ता चाड पर्वहरुले हामीलाई एकताको सुत्रमा बाँधेका छन् । सरकारले यस्ता साँस्कृतिक पर्वहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालीहरु बीचको यस्तो एकतालाई कमजोर पार्न विभिन्न समयमा भएका दुष्प्रयासलाई हामीले यही साँस्कृतिक आलोकमा परास्त गर्दै आएका छौं । र, नेपालीहरु जातीय, धार्मिक र साँस्कृतिक विविधताका बीच एकतावद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छौं । सवल राष्ट्रिय एकताको यस साँस्कृतिक आधारशीला हाम्रा लागि गौरवको विषय हो ।
यतिबेला हामी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा रहेकै समयमा विश्वब्यापी महामारी कोभिड– १९ सामना गरिरहेका छौं । यसले हाम्रो स्वास्थ्य र आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा अकल्पनीय दुष्प्रभाव पारेको छ । समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा यसले केही अवरोध गरेको छ । यस महामारीका दुष्प्रभावहरुलाई छिचोलेर सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुखी जनजीवन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न हामी अग्रसर छौं । महामारीबाट सुरक्षित हुँदै राष्ट्रको यस आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने सरकारको अग्रसरतामा साथ दिन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
अन्त्यमा इन्द्रजात्रा पर्वको अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
१६ भदौ २०७७
Previous post: कोरोना भाइरस (कोभिड १९) : अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६० लाख नाघ्यो
Next post: काठमाडौ. उपत्यकामा ४ सय ८१ जना सक्रमित, जम्मा सक्रमित ४०,५२९
आंशिक बदली रही मौसम सामान्यतया आज सफा रहने
हलुका सवारी चालक भर्ना नगर्न सरकारलाई सुझाव
प्रहरी प्रशासनपछि हड्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन बढ्यो
हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई कोरोना
थाहा पाइराख्नुस आज मंगलबारको राशिफलमा कस्तो छ तपाईको भाग्य ?
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कोरोनाबाट १५ जनाको मृत्यु
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट ५ सय २२ जनाको मृत्यु
कोलकातालाई हराउँदै पञ्जाब अ‌ंकतालिकाको चौथो स्थानमा